"Turkiga waxii ka dhacay marna ma aqbali karno" Waxaa yiri…. - Caasimada Online
Home Warar “Turkiga waxii ka dhacay marna ma aqbali karno” Waxaa yiri….
“Turkiga waxii ka dhacay marna ma aqbali karno” Waxaa yiri….
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay kaga hadashay afgambigii dhicisoobay ee xalay ka dhacay dalka Turkiga, kaasi oo ka dhan ahaa madaxweyne Erdogan.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay tahay dhacdadii xalay ka dhacday dalka Turkiga, taasina ay muujineyso sida shacabka ay kaga soo horjeedaan dad dhibaato u keeni kara.
Dowlada Soomaaliya ayaa sharwadayaal ku tilmaamtay ciidamadii militariga Turkiga ee doonayay iney afgambiyaan dalka Turkiga, balse markii dambe ku fashilmay.
Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhambaal u diray shacabka iyo dowlada Turkiga, isaga oo sheegay in midnimada Shacabka ay keentay in laga hortagaa iskudaygii la doonayay.
Turkiga ayaa taageero muuqata siiyay shacabka iyo dowlada Soomaaliya.